Ogaden News Agency (ONA) – Dr. Cabdiraxmaan Sumayd saaxiibkii fuqarada Afrika Ilaahay ha u naxariisto
Dr. Cabdiraxmaan Sumayd saaxiibkii fuqarada Afrika Ilaahay ha u naxariisto
Umadda islaamka waxaa ka baxay shaqsi qaali ahaa oo u dhashay dalka Kuwait. Dr. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa shaqsiyad aan horey u soo marin qarnigan caalamka islaamka isagoo kale.
Dr. Cabdiraxmaan Sumayd wuxuu ahaa ninka asaasay haya’addii caalamiga noqotay ee la odhan jiray –Guddiga Muslimiinta Afrika (African Muslims Committee) ee loo badalay Jimciyadda Taageerada Tooska ah (Direc Aid Association). Dr. Cabdiraxmaan wuxuu ku dhashay dalka Kuwait 1947, inta aanu u kaliyoobin hawlaha khayriga ahna wuxuu ahaa Dhakhtar ku takhasusay cudurada gudaha iyo qaliinka.
Waxaa Dr.Cabdiraxmaan intuu noolaa la gudoonsiiyay bilado iyo shahaado sharafyo badan oo uu ku mutaystay hawlaha gargaarka ah ee shucuubta Afrika uu u qabtay, waxaana ka mid ahayd Jaa’isada Boqor faysal oo qiimaheedii oo ahaa 750,000 oo Riyaalka Sacuudiga ah uu Waqf tabarucaad ah uga dhigay ardayda Afrika ee jaamacadaha kala duwan wax ka barata.
Intuu Afrika dhex socday dhowr jeer ayaa la’isku dayay in la dilo, sidoo kale waxaa ku qaniinay masas khatar ah intuu dhex socday duurka Afrika ee jiqda ah. ugu yaraan 25 sano ayuu Afrika dhex joogay oo dalkiisaKuwaituu booqasho un ku iman jiray.
Dr. Cabdiraxmaan Sumaydh Allaha u naxariistee, hawlaha taageeridda dadka tabaalaysan wuxuu bilaabay isagoo da’yar. Waxaana ka mid ah waxyaabaha xasuusta mudan in waqtiguu dhiganayay dugsiga sare uu maalin maalmaha ka mid ah arkay shaqaale taagan qoraxda kulul ee Kuwait oo sugaya basaskii qaadi lahaa. Isaga iyo saaxiibadii ayaa lacag inaty isku dareen oo gaadhi yar ku iibsadeen kolba in ku qaadi jiray. Waxaa kaloo ka mid ah arimaha xasuusta leh, minxadii jaamacadda oo ahayd 42 Dinaar markuu helay, ayuu go’aansaday inuu hal waqti un wax ka cuno inta kalena uu ku bixiyo sadaqaad iyo qaybinta kutubta islaamka, waxaana la sheegaa inuu dhulka ku seexan jiray oo markii la weydiiyayna uu yidhi lacagta aan sariirta ku gadan lahaa waxaan siinayaa masaakiinta. Barbaarintaa uu naftiisa ku barbaariyay taageerada fuqarada iyo hawlaha khayriga ah waxay u sahashay inuu noloshiisa oo idil u hibeeyo hawlahaa.
Wuxuu aaminsanaa in aan wax weyn lala sugin hawlaha khayri ah oo inta kolba gacanta lagu hayo lagu bilaabo. Waaguu bilaabayay hawshan waxyaabaha uu xasuusto waxaa ka mid ah 70-taneeyadii inuu muddo saddex bilood ah uu ka waayay maalqabeenka Kuwait wax ka badan 1000 doolar isagoo dhex socday 3ex bilood. Arintaa kuma aanay keenin niyad jab uu faraha uga qaado qorshihii u dajisanaa. Wuxuu badalay istraatiijiyadiisii siduu sheegay oo meeshuu kala xidhiidhi jiray maalqabeenada waaweyn ayuu uga wareegay inuu la hadlo dabaqada dhexe gaar ahaan haweenka, taasoo Ilaahay uu ugu furay ilo dhaqaale oo ilowsiisay 3exdii biloodee uu dhex socday maalqabeenka. Wuxuu durbadiiba shiishka saaray fuqarada qaaradda Afrika iyo miyiga Afrika inuu dhex socdo halkaasoo u baahan geesinimo iyo daal la’aan. Ilaahayna wuu ku gargaaray oo guulo waaweyn ayuu ka gaadhay oo kaga cadhaysiiyay ururada samafalka reer galbeedka oo albaabada u xidhay Afrika.
Wuxuu ahaa nin cimrigiisa u hibeeyay fuqarada Afrika oo diinta islaamka ku faafiyay meela badan. Waxaa sababtiisa ku islaamay in ka badan todoba milyan oo Afrikaan ah isagoo muddo 29 sano ku faafinayay diinta islaamka qaaradda Afrika. Wuxuu ka qayb qaatay dhismaha 5700 oo masjid, wuxuu hayn jiray 15,000 oo agoon ah, wuxuu qoday 9500 oo ceel, wuxuuna dhisay 860 dugsi iyo 4 jaamacad iyo 204 markaz islaami ah.
Allaha u naxariisto Dr. Cabdiraxmaan Sumaydh, wuxuu mudan yahay ku dayasho, isagoo ka tagay raad aan duugoobaynin.